Akali - lokhu akulona umlingisi ezivamile, okuyinto edonsela abadlali abaningi ukuthi kubonakala lilula ukufunda ekuqaleni. Kodwa ngesikhathi ukucwiliswa ezijulile kulolu cwaningo lo muntu okukhulunywa ngaye, kuyacaca ukuthi lula uyakhohlisa, futhi abadlali abaningi aphonse ucwaningo, uya nezinye izinhlamvu. Noma kunjalo, uma namanje ukhangwa lokhu uhlamvu, lo mhlahlandlela ukuze uzizwe Akali uhlamvu oluthile, ukuze baqonde okushiwo ukupela yakhe, futhi ufunde ukuzisebenzisa ngokuhlakanipha. Ngokwemvelo, akufanele silindele ukuthi ufunda lesi sihloko, kuhlanganise "League of Legends" futhi aqale ukunqoba zonke sokunene nesobunxele. Ngeshwa, lokhu msebenzi akuwona ngakho. Hyde ku Akali akuvumela ukuba uthole lonke ulwazi olufanele mayelana uhlamvu, kodwa ebasebenzisa umkhuba, babe osuvele unayo. Njengoba kushiwo ngaphambili, abadlali abaningi elingwa lula okusobala ukusetshenziswa futhi umthamo eliphezulu eziphonsweni babe Akali, kodwa ukuwasebenzisa kahle kwakuhilela zehlulekile ukwenza ngokuphelele.
Hyde ku isidingo Akali ukuqala ambalwa mayelana lokuthi le uhlamvu kuyinto ehlukile kancane kusuka iningi nezinye izinhlamvu. Iqiniso liwukuthi iningi namakhono abalingiswa has mana, ngesikhathi lo muntu okukhulunywa ngaye, esikalini sishoda. Kunalokho, lapho babe Akali amandla Inkomba. Kuyinto lokhu amandla yena udonsa ukusebenzisa amakhono abo. Kutholwa amandla angabacwasi ngokushesha, kodwa kuzomele uqonde ukuthi akukho siphonso ku mana, kungakhathaliseki imizamo isitha ukweba ke kuwe, noma imizamo yakho ukuze uthole ukudla kwalo, ngeke isebenze, ngoba mana njengoba enjalo ungenayo. Ngaphezu kwalokho, Control Remote, kuba ukupela enamandla kakhulu, ezitholakala kuwe lapho, akusho ngisho zidinga amandla - ukuqaliswa yayo uzodinga buthelela Uketshezi, engewona nokho angaphansi kwemithetho noma i-mana noma amandla. Ngokuvamile, akuyona uhlelo kakhulu elula, okuyinto yena, odlulela abadlala eziningi abakhetha a mana ejwayelekile. Kodwa uma ucabangela yokuntuleka mana, futhi ukutholakala kwegezi hhayi njengoba ukuntuleka uhlamvu, kanye inzuzo yakhe, ongayifinyelela imiphumela umxhwele, futhi abaqondise ukuba usizo Akali nalokhu.
Kungani-ke ungakwazi ufundise ngokuphathelene uhlamvu efana Akali, Hyde? Isizini 6 iyona zakamuva ezikhishwe umphakathi, ngakho wonke iziphonso nemiphumela yabo izobonwa ekukhanyeni izibuyekezo eyenziwe kakhulu ekuthuthukeni kwale sizini. Kalula nje, yingoba uchaza amakhono lamanje kunalabo ezibe zonyaka odlule. Futhi amakhono lokuqala ukuthi kuwufanele ukunaka, kuyinto yekwentiwa. Kuyinto ejwayelekile ngenxa "League of Legends" - kule game, umlingisi ngamunye has amakhono amahlanu, enye yazo yekwentiwa. Itholakala kuwe kusukela ekuqaleni the game, futhi akudingi ukudonsa, kanye ukwenza kusebenze, ngoba usebenza ngokuzimela (Ngakho-ke kubizwa ngokuthi yokwenziwa). Endabeni Akali le "isiyalo Parallel" - ikhono, okuyothi kungadala umonakalo eyengeziwe, kanye parallel wena uqobo imali enhle impilo phakathi nokuhlasela.
Isebenza kanjani? Ngamunye kuhlasela lwakho oluyisisekelo ukubangela okwengeziwe umonakalo eziyisithupha angu ezengeziwe magic, futhi zingandiswa emandleni ngamakhono akho. Ngesikhathi esifanayo ukubuyiselwa impilo emva ekuhlaseleni isitha futhi liye landa ngamaphesenti angu eziyisithupha futhi liyaqhubeka likhula, kuye ngokuthi ikhono amandla. Ngokuvamile, emazingeni aphakeme uzokwazi kukhishwe eziningi Izinzuzo zale passives, kodwa akunjalo konke ongakusho lokhu mhlahlandlela. Akali (ihlathi, maphakathi noma ku-inthanethi - indawo akunandzaba) has a iziphonso ezithakazelisa kakhulu, ngamunye okuyinto emfanele ukunakekelwa okukhethekile.
Yini longayisho Hyde Akali? Mead - omunye lezo zindawo lapho ungakwazi ngokuvamile ukuthola lokhu uhlamvu, futhi kumele uthathe lokhu ku-akhawunti, njengoba Ministry of Foreign Affairs uzokwazi ukusebenzisa ngempumelelo amakhono lokuqala asebenzayo - "umbulali Mark". Lokhu ilebula ukupela okuhlaselayo ukuthi kumele zibhekiswe Umphikisi ethize. uhlamvu lakho kuphosa isitha uhlobo ilebula elibangela kuye umonakalo e inani kusuka amayunithi 35 115 kuncike nezinga lekhono. Ngemva kwalokho, isitha kuphawulwa imizuzwana eziyisithupha, futhi uma ukuphatha amshaya ukuhlaselwa ejwayelekile phakathi nalesi sikhathi, niyakuba ukubhekana naye kwenye amaphuzu 45 kuya ku-145 ezengeziwe umonakalo, futhi ubuyisele amayunithi amane amandla (ukusetshenziswa kwalesi ukupela uya amayunithi ayisithupha, ukuze uyobuyela margin cishe aphelile ngokuphelele). Kodwa kuwufanele ukukhumbula ukuthi umdlalo lapho izenzo Akali - "LOL". Umhlahlandlela kuzokusiza uqonde isimiso ngamakhono, kodwa empeleni kungaba nzima kakhulu ukusebenzisa kuka kubonakala ngamazwi azo.
Enye yesehlakalo, okuyinto ilungele Akali - phezulu. Hyde sichaze ukuthi kungani: kwathiwa nje ikhono lingachazwa njengamanje. "Isivikelo zokuhwelela kwabo" - lokhu kuyikhono esiyingqayizivele, ikuvumela ukuthi uhlamvu ukudala endaweni ethile lapho kuba ayibonakali nezinye izinhlamvu, kanye lapho isivinini ukunyakaza luyanda kakhulu. Smokescreen ihlala nje imizuzwana eyisishiyagalombili - isikhathi, kwakwanele ukulinda buyisela emuva nezinye amakhono, ukuze ahlale ngemva kwempi kanzima futhi ulungiselela ukuhlaselwa ezintsha.
Kepha ukuthi lingakanani ijubane lokuya, ezingeni lokuqala khono landa ngamaphesenti angu amabili kuphela, kuyilapho ukwanda eziyikhulu amaphesenti ezingeni esiphezulu. Uma izitha olokotha aye ngoba Akali endaweni yakhe nenkungu, kufanele silungiselele yokuthi isivinini sabo lehla ngamaphesenti angu 14-30. Ngokuvamile, lokhu ingenye amakhono ezithakazelisayo kakhulu futhi ngempumelelo, futhi lo mhlahlandlela ukukutshela yimiphi Akali. Jungle - liphinde endaweni enhle ukusebenzisa amakhono, ngoba kukhona wena uzokwazi ngokuphelele ulahleke.
On leli khono kudingeka sigxilise ukunaka ngokukhethekile uma utadisha umlingisi efana Akali, Hyde. Tank - lokhu ingenye izindima umlingisi kungathatha lokhu, futhi sibonga ngokwengxenye kule amakhono. Iqiniso liwukuthi ngosizo kwalo angenza umonakalo kuzo zonke izitha sendaweni eyamukela ejwayelekile iziteleka. Ukulahlekelwa olulodwa ngisho umxhwele - kusuka amayunithi 30 kuya 130. Nokho, uma kubhekwa ukuthi lokhu umonakalo kukhona zonke izitha sabanjwa eduze uhlamvu yakho, amakhono kubonakala abe wusizo nakakhulu, ikakhulukazi uma tanking, noma iqhaza kunoma yiziphi ekuhlatshweni mass. Yiqiniso, ukwenza nale ukupela has a ezahlukene - abavumelani kwenye ikakhulukazi umbono-ngisho LoL iziqondiso. Akali - Nokho, sibalo kunalokho impikiswano, ungayithathi kalula amathuba ukuthi esiyithola ngokuguquguquka leli khono, kuyoba ubuwula ukusenqaba.
Nokho, sekuyisikhathi cabangela futhi ukupela amakhulu kunawo wonke endaweni ngilidle leli Heroine. "Shadow Dance" - a Control abanekhono kakhulu Remote, okuyinto izandla bushelelezi kungaba isikhali juqu. Okokuqala kufanele sinake essence, esixoxe kabanzi ngazo ngenhla. Njengoba sekushiwo, akukho mana noma amandla awasaphazwa ekusetshenzisweni Ulta, udinga Uketshezi esikhethekile kuye. Uyithola kanjani kubo? Uma ungenzi lutho, bese njalo ngemizuzwana amathathu (futhi ezingeni lokugcina amakhono - njalo ngemizuzwana 15) wena uzovela essence entsha. Kodwa uma kuzothatha ukuhlanganyela ngenkuthalo izimpi, ngokuyisisekelo uzonikezwa kuwe njengoba izitha kubulawa futhi ngokusiza iwukudambisa kubo abangane bakho. Yilokho uthayipha futhi Uketshezi.
Kodwa ngiyisebenzisa kanjani kubo? Ukuze wenze lokhu i- "Shadow Dance", wenze kusebenze, kuhloswe ke kwesitha, futhi uhlamvu kwakho khona manjalo teleport kuye, kubabulali 100 kuya ku-250 umonakalo. Zonke ungenza nokuhlasela amathathu enjalo ilandelana, njengoba buthelela esiphezulu Uketshezi ezintathu. Ngokuvamile, lokhu kuyikhono enamandla futhi umxhwele kakhulu ukuthi kuzokuvumela ukubamba iyiphi abaphikisi ngezithukuthuku imiphumela yesikhathi eside ezayo ukupela.
Ungakwazi ukumpompa amakhono njengoba uzobe ukhululekile, kodwa kunconywa ukusebenzisa Yakha usulungile, okuyokwenza indlela ephumelela kakhulu ukuthuthukisa uhlamvu lwakho. Nale Yakha, uyokwazi isebenze kahle kulo lonke umdlalo. Ngakho, amakhono yakho eyisisekelo "umbulali Mark" - kuyikhono udinga ukumpompa kwasekuqaleni nililethe kuze kufike kungakadluli ezingeni lesishiyagalolunye. Ngo parallel, isinyathelo esisodwa ezingeni "nokuVikelwa ukuhwalala" namazinga ezimbili "Wag inhlendla" ukuthi udinga ukumpompa futhi, ukumisa okwesikhashana kuphela entsha Level Ulta. Ngu nantathu uhlamvu ezingeni unga "zamaksit" "ngisikaza Crescent", bese kuba khona lingadonswa kuze kube sekupheleni 'Twilight Indwangu. " It lingathuthukiswa kulokhu kokugcina, njengoba amazinga olusha luthinta kuphela ijubane ukunyakaza uhlamvu yakho kepha isitha akulona isici esiyinhloko amakhono.
Nokho, iziphi izinzuzo ungagqamisa lokhu uhlamvu? Ngokuyinhloko-ke Kuyaphawuleka ukuthi esikhathini izimpi omunye Akali umane ayinakuqhathaniswa. Uma uphumelela ukwenza lokhu, kusukela ekuqaleni game wasithatha ngenzuzo kwindlela, Heroine kungaba singangeni ngenkani zabaholi bamaqembu aphikisayo, ikakhulukazi uma ngokushesha ukuthola nokubulala abantu abaningi ku ngezindleko zakhe siqu, kanjalo ukwandisa ukulimala kwakho. Pleasant Kuyaphawuleka ukuthi, ngisho noma izolahleka ngasekuqaleni mdlalo inzuzo, kungakhathaliseki impumelelo zethimba, Akali ngeke maphakathi impi ziqasha ifomu kunesidingo. ult wakhe - kuyikhono esiyingqayizivele eyenza kube ephathekayo futhi iyingozi kakhulu, futhi uma ungafunda ukulawula izinga lakho uhlamvu ke usebenzisa ulta zingaxazululwa ngenxa ukulwa olulodwa, futhi wonke umdlalo.
Sine Akali nemibi, eyisikhulu phakathi okuyinto ukuntuleka mass amakhono. Yeka ukuthi kuhle kanjani uhlamvu ngamunye ngamunye, njengoba nje kukubi mass ukuhilizisana. Kufanele ucabange njalo mayelana namandla ezokwenza kube nzima ukuba ngilulame uma usisebenzisa kabi. Kodwa ububi main wukuthi Akali namanje umlumbi, okungukuthi, it has a ababuthakathaka kunalokho, impilo, nokukhuthazela, kodwa ukuze sibe abafundisi abaphumelela ngempela, njalo kumele babe inhliziyo isenzo, ngakho-ke kuyodingeka isandla smooth kakhulu namahora amaningi umkhuba ukuze balukhulume kahle uhlamvu.
Kepha nabalingani, khona ongakhetha ezikhethekile: ekuqaleni umdlalo izoba wusizo kunoma wehlathi nge ikhono lokulawula, isibonelo, Shen futhi Kennen. Kodwa kusukela maphakathi Heroine umdlalo solo ubhekana nezitha uqobo.
Ngesikhathi esifanayo kukhona Inani lezinhlamvu ezokwenza msebenzi uyoba yingozi enkulu ngenxa Akali. Lawa ezinjengalezi Ari, Bay noma Annie.
Kanjani ukuze zilawule le Creeper e "Maynkraft" ngezindlela ezahlukene?
KV-1: Umhlahlandlela. tank KV- 1 e World of Tanks: ukubuyekezwa, iziqondiso, ubuthakathaka kanye zone kuphulwa
Air yokuhlanza: odokotela batusa Izibuyekezo
Ungwaqa Unverifiable e seligama: izibonelo. isiRashiya
Izidakamizwa "Grandaxinum": izinkomba ukusetshenziswa, umthamo, izinyathelo,
Inkukhu cutlet: ikhalori kanye nezinzuzo
"Ukukhula" noma "ukukhula" - sokupeleta leli gama? Kanjani umthetho ulungisiswa isipelingi?
Ubani izinkanyezi ku "ejimini uthisha"? Abalingisi serial "Fizruk": amagama nezithombe
Magyar - ke ... Umsuka, umlando